Nezvedu - Taizhou Zhonghan Tools Co., LTD
Taizhou Zhonghan Zvishandiso Co., LTDHwakagadzwa muna 2003 (zita rekare rekambani Taizhou Huangyan Hongye Machiner Company), Tiri nyanzvi mugadziri uye ekisipota kushandisa kukura, kugadzirwa uye rokutengesa akasiyana kukura muhombe sando, cordless sando zvibooreso uye yemagetsi maturusi zvigadzirwa, vakazvipira kuvaka yemhando yepamusoro zvishandiso fekitori.
Isu tiri muChengjiang Industrial zone yeguta rehuangyan nekutakura kuri nyore. Uye sando dzedu dzese dzinoenderana nemhando yepamusoro yemhando yepamusoro uye dzinokosheswa mumisika dzakasiyana siyana pasirese.
Tinogona kupa nyanzvi OEM & ODM SERVICE, inogona kuita 3D dhizaini & kugadzira zvigadzirwa zvinoenderana nevatengi dhizaini pfungwa kana chaiyo sampuli, kuitira kuti uve nechokwadi chako chakakosha chikumbiro chinogona kugutsikana Kana iwe uchifarira chero yedu sando kana ungade kukurukura tsika. odha, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu. Tiri kutarisira kuumba hukama hwebhizinesi hwakabudirira nevatengi vatsva pasirese munguva pfupi iri kutevera.
CCC Certification uye CE chitupa
Iva nemazana evashandi
Iyo kambani inovhara zviuru zvishanu zvemamirimita
Taizhou Zhonghan Zvishandiso CO, LTD. yaisa kusimbisa kukuru pane manejimendi manejimendi, isu takapasa kuyedza kweyepasi rose kuenzanisa seCCC Certification uye CE certification, Iyo kambani inovhara zviuru mazana mashanu metres, iine mazana evashandi, mune akawanda mashopu, anosanganisira ekushandisa, kusimba machining, giya kucheka, aruminiyamu kugadzira, kupisa kupisa, kukuya, mota, uye musangano mashopu, Kuwedzera kune emhando yepamusoro mitsara yekugadzira muChina uye huwandu hukuru hweyekupedzisira-yekugadzira michina uye yekuyedza zvigadzirwa zvemagetsi sando uye yakanyatsoziva kutungamira kwepasirese kugadzira uye R & D tekinoroji. Isu tinoshingairira kuzivisa sisitimu manejimendi manejimendi, zvigadzirwa zvemberi & zvekuyedza kuona zvigadzirwa zvine kugadzikana uye zvemhando yepamusoro kuvimbisa kugutsikana kwevatengi nekugadzira ramangwana rekuhwina-nevese vebhizinesi navo.
Taizhou Zhonghan Zvishandiso CO, LTD.rakashandurwa kubva kumabhizimusi ekugadzira kuita rakazvimirira rekutsvaga uye kusimudzira kwepamusoro-chikamu magetsi maturusi anozivikanwa emakambani. Nekuda kwemhando yepamusoro shatira sando uye yakanakisa sevhisi, isu takawana yepasirese yekutengesa network uye ingangoita 80% yesando dzedu dzinotenderera dzakatumirwa kuEurope, Southeast Asia, Mid-kumabvazuva neSouth America